သိင်္ဂီနွယ်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်: MERRY CHRISTMAS TO ALL!
ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ ခရစ်စမတ်နေ့အတွက် ချစ်သော မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများနဲ့ မောင်နှမ များ အားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်...
ကျမတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဖေဖေ တာဝန်ကျရာ နယ်တွေကို လိုက်ပါပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရလေတော့ လွိုင်ကော်တို့ ဟားခါးတို့လို ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေများတဲ့ ဒေသတွေမှာလည်း နေခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့တွေနဲ့ အတူ ခရစ်စမတ်ဆိုလည်း ပျော်လိုက်ရွှင်လိုက်ကြပေါ့... carol-singing တွေလာရင်လည်း ပျော်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ... သူများတွေအိမ်ရှေ့ရောက်နေရင် ဘယ်တော့ ကိုယ့်ဆီလာမလဲ မျှော်ရတာပေါ့...
နောက် မေမေက သူငယ်ငယ်ကပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ အတိုင်း ကျမတို့ကို ခရစ်စမတ်နေ့မှာ ခြေအိတ်တွေချိတ်ခိုင်းပြီး လက်ဆောင်တွေ ပေးတတ်ပါသေးတယ်... အဲဒီတော့လည်း ကလေးတွေပီပီ ဘယ်အချိန်များ စန်တာဘိုးဘိုးကြီး လာထည့်မလဲ ကောင်းကောင်းမအိပ်နိုင်ခဲ့ရဘူးပေါ့....များသောအားဖြင့်ကတော့ သကြားလုံးတို့ ချောကလက်တို့ပါပဲ...
မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေခဲ့တဲ့ လက်ဆောင်ကတော့ ယမ်းသေနတ်လေးတလက်ပါ။ အစ်ကိုနဲ့ မောင် ယောကျာင်္းလေးနှစ်ယောက်ကြားက ကျမ မိန်းကလေးအတွက် အိမ်မှာကစားဖော်က သူတို့ပါပဲ..အဲဒီတော့ သူတို့က သေနတ်ပစ်တမ်းကစားရင် ကျမက သူတို့ မကြိုက်တဲ့ သေနတ်မှ ကိုင်ခွင့်ရတာကိုး... မိန်းကလေးဆိုတော့ ကိုယ်ပိုင်သေနတ်အရုပ် မ၀ယ်ပေးပဲ ဘိုမရုပ်တို့ အိုးခွက်ပန်းကန်အရုပ်တွေသာ ၀ယ်ပေးခဲ့တာလေ..။ အဲဒီဘိုမရုပ်ဆိုတာကလည်း ကျမ လက်ထဲမှာ ဘယ်တော့မှ ရက်ကူးအောင် ကောင်းကောင်းမနေရရှာပါဘူး။ မျက်လုံးအရောင်လေးတွေနဲ့ကို သဘောကျလို့ မျက်လုံးကို ကလော်ပြီး ထုတ်ကြည့်တာနဲ့...လည်ပင်းလှည့်လို့ရရင် ဘယ်လိုထည့်ထားသလဲ သိချင်လို့ ခေါင်းဖြူတ်ကြည့်ရတာနဲ့... ဆံပင်တွေကို နှုတ်ပစ်တာနဲ့ ဆိုတော့ သူတို့ခမျာ ကျမလက်ထဲမှာသက်ဆိုးမရှည်နိုင်တာ ဘာဆန်းသလဲနော်..
အဲ.. ဘိုမရုပ်နဲ့က ကိုယ်တိုင်က မဆော့ချင်...Tea Set တွေနဲ့ ဆော့ပြန်တော့လည်း သူတို့က တကယ်မုန့်အစစ်နဲ့ ကျွေးမှ ဆော့မယ်ဆိုလို့ ကိုယ့်ဝေစု မုန့်တွေကို သူတို့ကို တကယ်ကျွေးရတာဆိုတော့ တွက်ချေမကိုက်ပြန်....စောစောက ပြောသလိုပါပဲ...ကိုယ်ပိုင်သေနတ်လေးတလက်မှ မရှိတော့ မျက်နှာငယ်နေရတဲ့ ဘ၀ကို မခံနိုင်တော့တာနဲ့ ဖေဖေတို့ကို ပူဆာမိလိုက်တယ်တူပါရဲ့... အဲဒီနေ့မနက်မှာ ကျမ ချိတ်ထားတဲ့ ခြေအိတ်ထဲ ယမ်းလိပ်ထည့်ပစ်ရတဲ့ သံသေနတ်အကောင်းစားလေး (အဲဒီတုန်းကပေါ့လေ..) ရောက်နေခဲ့တာ ဘယ်လောက်ပျော်ခဲ့လိုက်မလဲလေ... အမယ်..သူတို့က ဒီတခါတော့ ကျမ သေနတ်ပစ်ချင်လွန်းလို့ သူတို့ရတဲ့ သကြားလုံးတွေ ကိုယ့်ဆီရောက်ပေါ့.... ကလေးဘ၀မှာတော့ အဲဒီခရစ်စမတ်လက်ဆောင်လေးကတော့ မှတ်မှတ်ရရပါပဲလေ...
(ဒါလေးကတော့ G-Talk Status မှာ ကြယ်ပွင့်လေးနဲ့ ကိုဂျဲဂျယ်တို့ တင်ထားတာကို သဘောကျလို့ ကော်ပီလုပ်ထားတာပါ...)
We Wish YouaMerry♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪ Christmas♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪We Wish YouaMerry ♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪Christmas ♥ ♥ ♥We Wish You A Merry ♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪Christmas ♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪...And A Happy New Year!♪♫•*¨*•.¸¸♥
Posted by tg.nwai at 6:07:00 AM
Merry X'max & Happy new year!!!!
မသိင်္ဂီရေ..အခုလိုကာတွန်းရုပ်လေးတွေနဲ့ ပို့စ်
အိမ်ရှေ့ ခရစ်ယာန်အိမ်က နှစ်တိုင်း
ဒိုဒိုး (မုန့်ကုလားမည်း) လုပ်ပြီး ဝေလေ့ရှိတယ်။။
We Wish YouaMerry*♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪ *Christmas*♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪*We Wish YouaMerry ♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪*Christmas* ♥ ♥ ♥*We Wish You A Merry* ♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪*Christmas* ♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫♪...*And A Happy New Year!*
Ma Mon said...
Nice to see ur post.
သိင်္ဂီဘလော့ကို လင့်ထားပေမဲ့ ကိုကြီးကျောက် ဆီမှာpost အသစ်တွေ ပေါ်မလာဘူး..မနဲလိုက်ရှာနေရတယ်
ကျွန်တော့်မှာလည်း သံနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ယမ်းသေနတ်တစ်လက် ရှိခဲ့ဖူးတယ်ဗျ။ ရိုးရိုးကော်သေနတ်တွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်တော့ အဲဒါက အရမ်းကိုင်လို့ကောင်းတယ်။ လေးနေတာပဲ။ ခုတောင် ပြန်ပစ်ချင်လာပြီ။
ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ မသိဂီင်္
Happy new year မသိင်္ဂီ... မတွေ့ဖြစ်တာ ကြာပေမယ့် အမြဲတမ်း သတိရတယ်
Ma Ma. I still remember your gun.